Kooxda sevilla ayaa ku guuleystey markii lixaad koobka Europa league . | Somaliland Mirror
Home WARARKA Kooxda sevilla ayaa ku guuleystey markii lixaad koobka Europa league .
Kooxda sevilla ayaa ku guuleystey markii lixaad koobka Europa league .
Kooxda Sevilla ayaa cajiiba ugu guulaystay koobka ay taariikhda khaaska ah ku leeyihiin ee Europa League kadib markii ay guul soo laabasho cajiib ah ka gaadhay Inter Milan oo gool ku hor martay.
Sevilla oo hore taariikh cusub ugu haysatay kooxdii ugu horaysay ee saddex xili ciyaareed oo xidhiidh ah koobka Europa League ku guulaysatay ayaa markale sii dheeraysatay rekoodhka koobkan ee ay haysato.
Sevilla ayaa markii lixaad ku guulaysatay koobka Europa League waana kooxda kaliya ee tiro sidan u badan koobkan ku soo guulaysatay waxayna murugo baday kooxda Antonio Conte ee Inter Milan.
hadaba Dqaqiiqadii 4 AAD Rekoodhe Kooxda Inter Milan ayaa markiiba lagu abaal mariyay kadib markii uu Diego Carlos kulankii saddexaad oo xidhiidh ah uu rekoodhe sabab u noqday isaga oo qalad ku galay Romelu Lukaku.
Daqiiqadii 5 AAD Romelu Lukaku ayaa kooxdiisa Inter Milan goolka furitaanka ugu dhaliyay rekoodhaha qaladkiisa isaga lagu galay wuxuuna darbo joog hoose ah ku garaacay goolhaye Bounou waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Inter hogaanka kula wareegtay.
Daqiiqadii 12 AAD Sevilla ayaa si cajiib ah ugu soo laabatay ciyaarta kadib markii uu xidigii Man United reebay ee Luuk de Jong darbo madax aan la joojin karin uu ku dhaliyay goolka ay Sevilla ciyaarta kaga dhigtay barbaro 1-1 ah.
Daqiiqadii 33 AAD Sevilla ayaa dhinaca kale u dhigtay ciyaartii goolka looga hor maray waxaana goolka labaad oo isla madax ah ugu saxiixay goolkan labaad isla Luuk de Jong kaas oo caawin ka helay Banega waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay Sevilla hogaanka markeeda ku qabtay.
Daqaiiqadii 35 AAD Alla maxay waali ahayd!! Inter Milan ayaa markiiba bixisay jawaab deg deg ah waxaana gool madax ah culayskii Antonio Conte qabsaday kaga furfuray difaaca dhexe ee Diego Godin caaw oo caawin ka helay M. Brozović waxayna ciyaartu noqotay barbaro 2-2 ah.
Labada kooxood ayaa sidoo kale abuuray fursad ay goolal kaga ku dhalin kareen laakiin qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 2-2 ah.
Qaybtii labaad markii layskugu soo laabtay ciyaarta ayaa noqotay mid xamaasad badan laakiin fursad qasaarin waali ah oo ay sameeyeen Lukaku iyo Ashley Young ayaa Sevilla ciyaarta ku sii haysay.
Daqiiqadii 65 aad Lukaku ayaa kubbad kula soo baxay Sevilla laakiin waxa uu ku fashilmay in uu gool ku dhaliyo fursad cadaan ah waxaana badbaadin layaableh sameeyay goolhayaha Sevilla ee Bounou.
Daqiiqadii 74 AAD Sevilla ayaa goolkeeda saddexaad keensatay kadib markii uu darbo laba lugoodley ah kubbad ku darbeeyay Diego Carlos waxayna kubbadu ku sii dhacday Romelu Lukaku iyada oo ciyaartu noqotay 3-2 ay Sevilla waqti xaasaasi ah hogaanka ku qabtay.
Dhamaadkii ciyaarta Inter Milan ayaa bilawday in ay wax walba u samayso sidii ay goolka barbaraha u keensan lahayd laakiin daqiiqadii 91 aad goolhayaha Sevilla ayaa badbaadin kale oo cajiib ah ka sameeyay Candreva oo Inter barbaraha u keeni gaadhay.
Previous PostCali Maxamed Geedi Oo U Dhaw Inuu Noqdo Ra'isal Wasaaraha Cusub Ee Somalia. Next PostSucuudiga oo ka soo horjeestey heshiiskii dhexmarey isra’il iyo imaaraadka carabta